မြောင်းမြသက်​ငယ်​မုဒိန်း​နောက်​ဆက်​တွဲသတင်း – Myanmar Magazine
March 1, 2019 myanmarmagazine	ပြည်တွင်သတင်း
မြောင်းမြမြို့နယ်​ ပျဉ်​ပုံအုပ်​စုအပိုင်​တွင်​သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုဖြစ်​ပွား ။ ​မြောင်းမြ.မတ်​.၁ ။ ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး​မြောင်းမြမြို့နယ်​ ပျဉ်​ပုံအုပ်​စုအပိုင်​တွင်​အသက်​(၆)နှစ်​အရွယ်​မိန်းခ​လေးငယ်​တစ်​ဦးကို(၁၈)နှစ်​သားအရွယ်​အကိုဝမ်းကွဲ​တော်​စပ်​သူမှမတရားပြုကျင့်​၍လည်​ပင်းညှစ်​မျက်​နှာဦး​ခေါင်းတို့အားရိုက်​နှက်​၍​တောထဲတွင်​ပစ်​ထားခဲ့​ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်​.
‌ ဖြစ်​စဉ်​မှာသိလ္လာဂတ်​စုရဲကင်းအပိုင်​ပျဉ်​ပုံ​ကျေးရွာအုပ်​စု.​ယခင်(၉၃)စစ်တပ်​​​ကော်​ဖီစိုက်​ခင်းတွင်​တဲထိုး၍အလုပ်​.လုပ်​ကိုင်​စား​သောက်​ကြ​သောအဖ.ဦးချစ်​ထူး.အမိ​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ဝင်းတို့မှ​မွေးဖွား​သောသမီးငယ်​​လေး.မစုပုံချစ်​(ခ)မကြယ်​စင်​လင်းအသက်​(၅)နှစ်​KGတန်းသည်​ ၁.၃.၂၀၁၉ဒီမနက်​ပိုင်း​ပျောက်​​နေ​သော​ကြောင့်​
ခ​လေးအား​တောထဲသို​ဝင်​ရှာ​ဖွေကြရာ “တရားခံ.​အောင်​ဝင်း​အေး.(၁၈)နှစ်​အဖ.ဦးဝင်းထွန်း.အမိ​ဒေါ်သန်း​အေး (ရှစ်​အိမ်​တန်းသား)အားထင်းစီးထမ်းပြီး​ပြန်​လာသည်​ကို​တွေ့သဖြင့်​ခ​လေး​တွေ့ခဲ့​သေးလား​ဟုမေးမြန်းရာမ​တွေ့ခဲ့​ကြောင်း
နာရီပိုင်းအတွင်းဖမ်းမိခဲ့​ကြောင်းတရားခံ.​အောင်​ဝင်း​အေး(၁၈)နစ်..အား(ပ)၁၃၄/၂၀၁၉ရာဇသတ်​ကြီးပုဒ်​မ၃၇၆/၃၂၅အရ​မြောင်းမြမြို့မရဲစခန်းမှထိ​ရောက်​​သောပြစ်​ဒါဏ်​ချမှတ်​နိုင်​ရန်​​ဆောင်​ရွက်​လျှက်​ရှိ​ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်​ ။ ရ​ဝေ​မောင်​(​မြောင်းမြ)
← ချစ်သူအား ဂျာမနီကို ဆွေပြမျိုးပြခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မစ်ကီ
သမီးရည်းစားနှစ်ဦးရန်ဖြစ်ရာ မိန်းကလေးလက်ချက်နဲ့ ကောင်လေး ဆေးရုံရောက် →
“ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ယာဉ်တန်းမိုင်းဆွဲခံရပေမယ့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိ”
January 1, 2019 myanmarmagazine Comments Off on “ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ယာဉ်တန်းမိုင်းဆွဲခံရပေမယ့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိ”
ဂျက်တိုက်လေယာဉ်အသုံးပြုပြီး AA ကို တစ်ညဉ့်လုံးတိုက်
March 14, 2019 myanmarmagazine Comments Off on ဂျက်တိုက်လေယာဉ်အသုံးပြုပြီး AA ကို တစ်ညဉ့်လုံးတိုက်